Sida loo Beddelaan MKV in AVI on Mac / Windows (Windows 8 ka mid ah)
Sida loo Beddelaan MKV in AVI on Mac / Windows (Windows 10 ka mid ah)
Raadinta in uu kaydiyo muujinaya TV iyo filimada qaab Tifaftirayaasha, waxaan u isticmaali qaab MKV ka badan, laakiin nasiib daro, aan PSP aadan iyaga laakiin AVI aqoonsan, sidaa daraadeed waa inaan badalo aan MKV in AVI si ay si sax ah oo ku saabsan ka ciyaari karaan qalab. Waxaan ula jeedaa, Waxaan doondoonayaa hab fiican si loogu badalo MKV. Talooyin kasta, pls?
MKV bixisaa awoodda weyn kaydinta maxaa yeelay waxa ay taageero ka heli karto video kala cayncayn ah, audio iyo subtitles gudaha weelka la mid ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dad badan iPod, MP4 oo gaar ah oo dheeraad ah dadka isticmaala qalab ay tahay in ay ka faa'iidaysan foomkan ah file awoodin, sababtoo ah qalabka ay kaliya ma taageeri qaab sida aadan. Sidaa awgeed, waxaa jiro koror ah ee looga baahan yahay ee diinta MKV galay qaar ka mid ah qaabab kale file, sida AVI, kaas oo awood u video music iyo kuwii ku caashaqi jiray ka qaadashada Raaxo full of videos iyo Cajalado. Iyo ujeedada la mid ah waxaa lagu guulaysan karaa iyada oo la kaashanayo MKV ah in Converter AVI.
Qeybta 1: bilaabo Top 5 MKV ka FREE in AVI converters
Qeybta 2: Hel MKV a Professional & xoogbadane in AVI Converter
Kuwa soo socda waa 5 Top MKV in avi converters laga yaabaa in aad rabto in aad isticmaasho. Iyada oo ku xidhan shakhsi aad door bidayso, waa in aad awood u helaan mid ka mid ah ugu fiican in lagu soo kordhin doonaa baahidaada noqon.
Free Online Converter File
Waa jiitaa-iyo-hoos u dhac Naaarta saciiro u-soomi video Converter, Converter DVD iyo gubi, kaas oo awood kuu si loogu badalo DVD-ka iyo in ay ficil ahaan qaab video kasta, isagoo 30 jeer xawaaraha si dhakhso ah diinta. Waxaad dhici karta in aad videos boosaska badan iyada oo loo marayo isla iyaga diinta gasho AVI, MP4, wmv, FLV, MKV, Mpg, 3GP iyo wax ka badan.
Taageerada Qaabka Broad: Beddelaan inay kala duwan oo badan ee HD iyo SD qaabab video: caadi HD qaab video sida HD TS, HD Mpg, HD wmv, MP4 HD, HD MKV, iwm; videos SD caanka ah sida AVI, MP4, MOV, wmv, MKV, Mpg, MPEG, H.264 iyo in ka badan. dhoofinta Audio ka MTS Video: Waraaqda files audio ka cajalado AVCHD oo waxaan iyaga ku badbaadin sida MP3, WMA, M4A, regelingen, daanyeer, . FLAC, AAC, AC3, MKA, OGG, AIFF, RA, RAM, MPA In kor loo qaado Videos la Functions Edit Rich: Dallaga ku laayeen madow si shaashad buuxda, jar qayb aan la rabin, shaandheyn sideway videos, iyo ku milmaan dhowr videos galay mid ka mid ah hal, codsato qaar ka mid ah sawir ama qoraal oo xiiso leh watermark si ay u dheeraad ah oo gaar ah iyo iminka.
Muraadka kowaad ee mashruucan uu yahay in ay soo saaraan codsi in uu yahay qaadi karo iyo inuu karo inuu soo transcode qaabab video badan intii suurto gal galay DivX. Converter Tani waa awood diinta inta badan files la gelin, oo ka mid ah MPEG-1, VOB, FLV, AVI, MP4, MPEG-2 iyo qabnay AVI Synth galay DivX. Waxaa si toos ah configures goobaha Deji cabbirka codsaday file ah wax soo saarka. User A ayaa in ay doortaan kaliya tirada loo baahan yahay file ka mid ah wax soo saarka, halka software samayn doonaa inta ka dhiman.
Gacan-jabis (Windows, Mac iyo Linux)
Noocan ah aalad loo isticmaalo si loogu badalo video ka kaliya oo ku saabsan qaab kasta oo ay u soo xulidda casriga ah, codecs ballaadhan oo ay taageerayaan. Waa codsi waxtar leh si loogu badalo file MKV lagu video AVI ah si ay u arkaan in aad doorato qalabka. Waxaad awoodi doontaa in aad diinta in xoogaa ilbiriqsiyo ah iyada oo loo marayo xulashada profile gaar ah filaayo in qalab gaar ah, ama ay doortaan profile wadajir ah u tayo sare leh ama beddelaad caadiga ah. Software Waa wax fudud, si dhakhso ah oo fudud, si aad u damaanad qaadi karno habboonaan iyo hufnaan ka.
Factory Qaabka (Windows)
Tani waa MKV kale functional in Converter AVI aad siin doonto muuqaalada diinta ka weyn. Waa Converter warbaahinta multi-functional. Codsiga waxaa bixiya hawlaha kala duwan oo ay ku jirto diinta ka mid ah nooc kasta oo files si MP4 ah, 3GP, AVI, wmv, Jabbuuti, FLV, Mpg iyo wax badan oo dheeraad ah. Files MP4 la jaanqaadaan iPhone, PSP, iPod iyo Blackberry ayaa qaab video. Software waxa kale oo uu awood u hagaajinta audio dhaawacan iyo file video.
Convertfiles (Converter Online)
Tani MKV online in Converter AVI badasha xawaare sare. Waxay awood u 330-gaynta ee kordhinayaan iyo file saarka qaabab. Oo weliba waxay damaanad qaadaya ammaanka file iyo kuwa gaarka ah. File Your badaley waa la wada dumin doonaa 24 saacadood gudahood, oo ninna ma waxay fursad u leeyihiin in ay aad marka laga reebo. Ka sokow, Converter this taageertaa diinta file badan, oo ay ku jiraan video, audio, image, KAYDKA, WARQADDA, Bandhigga, E-BOOK, iyo iwm
Tani MKV in Converter AVI vertually waa qalabeed video hawlo badan ah. Sababaha weyn teraabiyada app this waa kala duwan ee qaabab ay taageerto, si degdeg ah xawaaraha diinta, iyo tayada wax soo saarka sare.
Professional Video Converter: Beddelaan MKV in ku dhawaad ​​qaab kasta, oo ay ku jiraan AVI, MOV, MP4, wmv, 3GP, FLV iyo in ka badan.
Sida dhaqsaha badan Video Converter: Waxaa badasha videos at 30X ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta, taasoo ka dhigeysa u tartameen oo keliya dhulka ku tuurtay.
Tayada Output Sare: Waxa ay taageertaa 2D in ay diinta ka 3D, oo kuweeda videos la AAN tayada khasaaro.
Video Editor Fantastic: Waxay kuu ogolaanaysaa inaad sameeyo guriga video qosol leh shaqada awood badan tafatir sida Final Cut Pro.
Great DVD gubi: Waxa aad bixisaa DVD-aragnimo hufan by diinta video files si DVD la arrimo DVD menu ka mid ahaa.
Sida loo Beddelaan MKV in AVI la Wondershare Video Converter Ultimate
1. Hel Converter MKV diyaariyey
Download version saxda ah ee MKV in Converter AVI sida uu nidaamka hawl gal, ka dibna loo soo dajiyo oo abuurtaan. Kan waa hage inta badan madal Windows.
Fiiro gaar ah : Haddii aad u doonayaa inaan badalo MKV ee Mac, waxaad tagi kartaa ka Guide User of Video Converter u Mac u hesho macluumaad faahfaahsan oo dheeraad ah. By jidkii, aad edit karaa faylasha aad inta lagu jiro diinta Mac loogu gol leeyahay.
2. Ku dar videos MKV in MKV si AVI Converter
Waxaad ku dari kartaa faylasha aad by jiidayeen oo iyaga u tiiri si Converter ama riixaya "Add Files" button markaas daalacanaya aad drives adag iyo soo degida videos MKV aad rabto in aad si loogu badalo ka. Iyada oo shaqo ee Dufcaddii diinta, waxaad halkan u dajiyaan karaa in ka badan hal file MKV galay qalab loogu celiyaa.
3. Set AVI sida qaab wax soo saarka
Riix liiska "Qaabka Output" hoos-hoos u dooro AVI sida qaab wax soo saarka. Waxa kale oo aad u qeexi karaan encoder ku saabsan qalabka-sida "Settings" ikhtiyaarka, sida ku cad image hoose.
4. U beddelaan MKV in AVI
Guji "Beddelaan" marka wax walba ayaa lagu wadaa ka dibna qaab beddelidda in lagu dhamaystiri doono si toos ah aad u. Waxaad ka heli kartaa faylasha la gediyay adigoo gujinaya "Open Folder".
Video Tani MKV in AVI video qalab diinta karaa oo keliya ma badalo MKV video in AVI video , laakiin sidoo kale loogu badalo dhexeeya qaabab warbaahinta kale oo badan sida MOV, 3GP, FLV, Jabbuuti iyo MP4.
Tani video MKV in AVI video Video Converter edit karaa videos ka hor inta qaab beddelidda. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel video ah laga keeno, waxa ay doortaan oo guji "Edit" button on video kasta oo wax bar, ka dibna la sameeyo videos qaabka aad u gaar ah!
> Resource > Beddelaan > Sidee inay u beddesho MKV in AVI ee Mac / Windows